တငျပါး ယား၍ ကုတျမိရာ မှ နခေ့ငျြးညခငျြး ဘဝပွောငျးသှားရသညျ့ မိနျးကလေး – Let Pan Daily
ကြှနျမ၏ တငျပါးကို ယားလှနျး၍ ကုတျမိသညျ။သူငယျခငျြး နှဈယောကျ ဘေးမှာရှိသညျ ။ တဈယောကျ က မျောလီ တဈယောကျ က ခငျမွရညျ ဖွဈသညျ ။ကမြ ယားလို့ တငျပါးကုတျမိတဲ့ အခါ သူငယျ ခငျြး မျောလီက ဓာတျပုံ ဖတျြခနဲ ရိုကျခလြိုကျသညျ။ပွီးတော့…၊ ပလှတျ ဆိုပွီး အငျတာနကျ ခြိတျပွီး ဖဘေု့တျပျေါ တငျခလြိုကျသညျ ။ ကမြ တို့ သုံးယောကျ အတူရှိသညျ ဆိုေ တာ့ tag တှဲတငျလိုကျသညျ ။ ဆေးထိုးလိုကျပီ ဟု မျောလီ က ရေးတငျလိုကျသညျ ။ ခငျမွရညျက အရငျ like ဝငျလုပျသညျ ။
ကမြ တှေ့ တော့ သူတို့ နှဈယောကျကို မကျြစောငျးထိုးလိုကျရုံသာ အပွဈပေးမိသညျ ။ ကမြ တို့ လုပျမိသညျက ပြျောစပေကျြစသေဘောသာ ဖစျေ့ဘုတျ ကိုယျစီပိတျလို့ ကမြတို့ မုနျ့ဆ ကျ စားသညျ ။မုနျ့စားနစေဉျ နာရီဝကျအတှငျး မှာပငျ ကမြတို့ မြိုးဖကျြမ ဘဝ ရောကျသှားလိမျ့မညျ ဟု လုံးဝ အမတှေးမထငျထားမိ ။
ဖစျေ့ဘုတျ ပွနျဖှငျ့လိုကျတော့ ကမြပုံကို Share လုပျထားသူ ၂၀၀ ကြျောနပေပွေီ။ကောမနျ့မြားတှငျ မွနျမာအမြိုးသမီး ဖွဈပွီး အရှကျမရှိကွောငျး ၊တငျပါးဆိုသညျမှာ ကုတျရနျမဟုတျကွောငျး ၊အီးအီးပါရာတှငျနှငျ့ ထိုငျရာတှငျတာ သုံးသငျ့ကွောငျး ၊ကမြတငျပါး ကုတျလိုကျသဖွငျ့ မွနျမာအမြိုသမီးမြားအတှကျ မြားစှာ သိက်ခာကြ ကွောငျး ရေးသားထားကွသညျ ကို မွငျလိုကျရသညျ။
မွတျစှာဘုရား… ၊ ကမြ တငျပါး ကို ရိုးရိုးသားသား ယား၍ ကု တျလိုကျခွငျး သာဖွဈသညျ ။တဈနိူငျငံလုံး ကို စျောကားလိုစိတျမရှိကွောငျး ပွောရဲပါတယျ ။ကမြ တငျပါး ကမြ ပိုငျသညျ ထ ငျသဖွငျ့ အားရပါးရကုတျလိုကျမိခွငျးသာဖွဈသညျ ။ သူငယျခငျြး ကလဲ ကမြတငျပါး ကမြ ပိုငျသညျ ထငျသောကွောငျ့ပဲ ရိုကျတငျလိုကျခွငျးသာဖွဈပလေိမျ့မညျ ။ကောမနျ့ တဈခု ဖတျပွီး ကြ မ တျောတျော လနျ့သှားတယျ ။ ဥပဒေ ဖွငျ့ ထိရောကျစှာ အရေးယူသငျ့သညျတဲ့ ။အမလေး ! ! ! မွတျစှာဘုရား ကယျတျောမူပါ ။ သူ့ ကောမနျ့ကိုတငျ Like နှဈဆယျကြျော ဝိုငျးလု ပျ သှား ကွသညျ ။ကမြဟာကလြဲသံသယဝငျသှားသညျ ။ငါ ကုတျမိတာ လှနျသှားလား ။မထငျပါ ။ကမြ ကုတျတုနျး က သတိပငျမထားမိပါ ။သူငယျခငျြး ပုံရိုကျလိုကျမှသာ ကမြ ကုတျလို့ ကုတျမိမှနျး သတိထားမိပါသညျ ။
ကမြက ခန်ဓာကိုယျ လှသဖွငျ့ မွနျမာဝတျစုံဝတျတတျပါသညျ ။မုနျ့စားနရေငျး တငျပါးနားက ယားလှသဖွငျ့ အားရပါးရ ကုတျမိပါသညျ ။မျောလီမ ကို လှမျးဆဲရငျး ပုံဖကျြဖို့ ပွောပါသညျ ။မျော လီေ ကာ၊ခငျမွရညျ ကောကမြကို တောငျးပနျကွပါသညျ။သို့သျော သူတို့ နှဈယောကျလညျး အခွအေနမေကောငျးပေ ။ကမြတငျပါးကုတျနသေညျ့ ပုံတငျမဟုတျ ၊ သူတို့နှငျ့တှဲ၍ ရိုကျထားေ သာပုံ ပါ ပါသညျ ။ကမြတို့ကို ဂိုဏျး ဖှဲ့ထားပွီး ရညျရှယျခကျြရှိရှိ လုပျကွသညျ ဟု တခြို့ က ရေးသားထားကွသညျ ။ကမြတို့ မုနျ့စားရငျး ခကျြခငျြးကွီး တနိူငျငံလုံး တံတှေးခှကျထဲ ပကျ လ ကျမြောလိမျ့မညျ ဟု မတှေးထားမိ ။ခုတော့ ကမြတို့ သုံးယောကျ ပကျလကျကော မှောကျလကျြကော မြောနပေပွေီ ။ကမြက တငျပါးပါ ကုတျသဖွငျ့ ဇောကျထိုးပါ မြောနပေပွေီ ။တ ဈေ ယာကျ မကျြနှာ တဈယောကျ ကွညျ့၍ မကျြရညျဝဲနမေိကွပပွေီ ။
ကမြတို့ သုံးေ ယာကျ အစားကို ဆကျ မစားနိူငျကြ ။တူ ကို ပါးစပျက ကိုကျပွီး ဒူးတုနျနကွေသညျ ။ကံဆိုးလှပသေညျ ။ ကမြ တို့ ပုံဖကျြလိုကျသျောလညျး မမှီတော့ ၊ ကမြ တို့ ပုံနှငျ့ တွ ခားေ ပ့ချြ မှာ တကျနပေပွေီ ။မွတျစှာဘုရား like က 1 k ။ ကမြ ကို friend request 200 လောကျ တကျလာသညျ ။ကမြ တငျထားသော နောကျဆုံးပုံအောကျ မှာ အ မြိုးဖြ ကျမ လို့ လာမနျ့ကသြညျ ။ကမြအဖေ နှငျ့ တှဲရိုကျသော ပုံအောကျ မှာ ကမြ ရဲ့ စပှနျဆာ ဟု ပွောသညျ့ ကောမနျ့တတျလာသညျ ။မကွာပါခြေ… ၊ ပချြေတဈခု က ထပျတကျလာပွီး ကမြကို ပယျပယျနယျနယျ ဆဲကသြညျ ။မဖွဈခဘြေူး… ကမြ တုနျ့ပွနျမှရတော့မညျ ဖွဈသညျ ။
ကမြ တငျပါး ကုတျမှုသညျ အခြိနျမရှေး လူထုကွားထဲ ပွနျ့နွှံ့ပီး လှတျတျောထဲ အရေးကွီးအဆို အဖွဈ ရောကျသှားနိူငျသညျမလား ။ထိုအခါလူထုကွားထဲ အမြိုးသမီးမြား တငျပါး ကုတျခှငျ့ မကုတျခှငျ့ မဲခှဲဆုံးဖွတျကွလိမျ့မညျ။အကယျ၍ မကုတျခှငျ့ တှငျ မဲအရအေတှကျ ၊ မြား သှားပါက ၊ တခွားအမြိုးသမီး မြားကပါ ကမြကို ဝိုငျးဖွဲလိမျ့မညျ ။နငျ ယှလို့ ၊ ငါတို့ အခု ငါတို့တ ငျပါး ငါတို့ မပိုငျတော့ဘူး ဆိုပွီး သတျလိမျ့မယျ ။ကမြတို့ ပိုကျဆံအမွနျရှငျးပွီး ကမြတို့အိမျကိုပွနျပွေးကွသညျ ။ကမြ ဖွရှေငျးဖို့ စတငျရပါပွီ ။
အရငျဆုံး ကမြ အမဆေီ့က အိမျထောငျစု စာရငျးတောငျးရသညျ ။အဖဆေိုတာ သခြောကွောငျး အရငျရှငျးရပါမညျ ။ကံဆိုးခငျြတော့ အဖနေ့ာမညျက နှဈမြိုး။ မှတျပုံတငျ နှငျ့ အိမျထောငျစု နှ ငျ့ ကှဲနသေညျ ။ မဖွဈခြေ အမှုပိုကွီးလိမျ့မညျ ။အမကေ အဖကေို့ အားဘှားရှလူး နသေညျ့ပုံ ခြော့မော့ရိုကျခိုငျး ရသညျ ။အဲ့ပုံနှငျ့ အမတေို့ မင်ျဂလာဆောငျပုံ နှငျ့ မိသားစု ငါးယောကျ ပုံကို တဈပေါငျးတညျး တငျပွီး အဖေ ဖွဈကွောငျး ရှငျးရသညျ ။
ခငျမွရညျကပွောသညျ ၊ ဟဲ့ ငါတို့ သုံးယောကျ cover photo ကို ဘုရားပုံ မွနျမွနျခြိနျးရအောငျ ဟု ပွောလာသညျ ။လိုလိုမယျမယျ သုံးယောကျသား တဈယောကျ တလှညျ့ အိမျထဲ မှာ တငျ ယောဂီအကြီ င်ျ ဝတျပီး ဓာတျပုံ ရိုကျလို့ pofile pic ပါ ပွောငျးလိုကျကွသညျ ။မပွောနိူငျ ၊ တငျပါးကုတျရငျ မွနျမာသိက်ခာကသြညျ ဟု အပွောခံရသလို အခြိနျမရှေး ကမြတို့က is is အဖှဲ့ က ဖွဈသညျဟု မစှပျစှဲဘူးလို့ မပွောနိူငျ ။
ကမြ တို့ သုံးယောကျ ဒူးခေါငျးခငျြး တဂတျဂတျ မွညျအောငျ ရိုကျရငျး ကွောကျခြေးပါနကွေပပွေီ ။ မျောလီက ပိုကွောကျနသေညျ ၊ သူစသညျ့ ဇာတျလမျး မဟုတျပါလား ။စပှနျဆာ ပွဿ နာ ရှငျးလိုကျနိူငျပမေဲ့ တငျပါးကုတျခွငျး ပွဿနာ က မပွီးနိူငျသေး ။ကမြ တငျပါးကုတျနပေုံသညျ 4.1k အဖွဈရောကျသှားနပေပွေီ ။မဖွဈခြေ .မဖွဈခြေ ။ကမြ ပထမဆုံး သူငယျခငျြး နှ ဈေ ယာကျကို ၊ ကမြတှငျ ပှေးနညျးနညျးရှိကွောငျး ဝနျခံရသညျ။ဘယျသောအခါ မှ တငျပါးလှနျပွပွီး ပှေးကှကျရှိကွောငျး တောငျးပနျရလိမျ့မညျဟု ကွိုမတှေးထားမိ ။ကမြ အဖွဈက မနှဈ က နှငျ့ပငျ မတူ ။ ဇာတျလမျး က မှတျတမျး မဟုတျ။နိူငျငံကြျောပတေော့သညျ ။
ကမြ လိမျးသော ညဈဆေးဘူး နှငျ့ ကမြတငျ ပါးက ပှေးကှကျလေး ကို ဓာတျပုံ ကပျရိုကျလိုကျသညျ ။ ပှေးကှကျ မွငျရုံသာ ။ကမြ စာရှညျရှညျရေးသညျ ။ကမြ ဘဝတှငျ ပှေးကှကျ စပျေါ လာပုံ ။ကမြ ပှေးကှ ကျအပျေါ နာကွညျးပုံ ။ကမြ ဘာတှစေားလြှငျမတညျ့ပုံ ။ရှညျလြား ထှပွေားစှာရေးပွီး ဓာတျပုံနှငျ့ လူ နှဈဆယျ လောကျ ကို tag တှဲတငျ လိုကျသညျ ။အဟငျ့ဟငျ့… ရှကျလိုကျသညျ့ ဖွဈခွငျး ။ပှေးကှကျ အကွောငျး စီကာပတျကုံးရှငျးပွပွီး အငျတာနကျပျေါတငျရသညျ့ ဘဝ ။သို့သျော ကိုယျ့wall ပျေါကိုတငျရုံနှငျ့ မပွီး ။ကမြ ပရိသတျ အဲ့ေ လ ယောငျလို့ ကမြ တငျပါးကုတျနပေုံ စတေးတပျအောကျက ကောမနျ့ ပိုငျရှငျတိုငျးကိုသိအောငျ လုပျရပမေညျ ။ဒါမှ ကမြ သတငျးကို ထိနျးနိူငျပမေညျ ။
ကမြ တငျပါး မှာ ပှေးကှကျရှိ၍ ကုတျမိကွောငျး ၊ ကမြ မှားမှနျး အခု သိပွီ ဖွဈကွောငျး ၊ နောကျနှောငျ ဆငျခွငျပါမညျ ဟု ကတိပွုကွောငျး ရေးပွီး ကောမနျ့ မြားအား reply လိုကျွ ပနျ ပါသညျ ။ကမြ မကျြနှာ ပူသညျ ဟု ဆိုရမလား၊ အေးသညျဟု ဆိုရမလားပငျ မသိတော့ပါ ။ကမြနာမညျ နှငျ့ အကောငျ့ပေါငျးမွောကျမြားစှာ၊ page မွောကျမွားစှာပျေါလာပါသညျ ။ကမြ ၏ တောငျးပနျမှုကွောငျ့ ကမြ ၏ တငျးပါကုပျခွငျး အမှုသညျ လှတျတျောအထိ ရောကျမသှား ။ ခံဝနျကတိလောကျနှငျ့သာ ပွီးသှားသညျ ဟု ဆိုရပမေညျ ။
ကမြကို နောကျတဈနေ့ သတငျးမီဒီယာ တဈခုက အငျတာဗြူးလိုကွောငျးပွောလာသညျ ။ယခုဆိုရငျ ကမြ ဆယျလီတဈယောကျ ဖွဈနပေသေညျ။နောကျတဈလ ထဲတှငျ ပှေးဝဲယားနာ လိမျးေ ဆး ကွျောငွာတဈခု ရိုကျရနျပငျ လကျခံထားပါသေးသညျ ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ …ကမြဘဝကို ဖဘေု့တျက တဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲ ပေးခဲ့ပါပွီ ။
ပြီး ပါ ပြီ ။
အထူးသတိပေးခကျြ။ ။ တငျပါးလိုကျမကုတျပါနှငျ့။
ကျွန်မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည်။သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည် ။ တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက် က ခင်မြရည် ဖြစ်သည် ။ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ် ချင်း မော်လီက ဓာတ်ပုံ ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ပြီးတော့…၊ ပလွတ် ဆိုပြီး အင်တာနက် ချိတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ချလိုက်သည် ။ ကျမ တို့ သုံးယောက် အတူရှိသည် ဆိုေ တာ့ tag တွဲတင်လိုက်သည် ။ ဆေးထိုးလိုက်ပီ ဟု မော်လီ က ရေးတင်လိုက်သည် ။ ခင်မြရည်က အရင် like ဝင်လုပ်သည် ။
ကျမ တွေ့ တော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်ရုံသာ အပြစ်ပေးမိသည် ။ ကျမ တို့ လုပ်မိသည်က ပျော်စေပျက်စေသဘောသာ ဖေ့စ်ဘုတ် ကိုယ်စီပိတ်လို့ ကျမတို့ မုန့်ဆ က် စားသည် ။မုန့်စားနေစဉ် နာရီဝက်အတွင်း မှာပင် ကျမတို့ မျိုးဖျက်မ ဘဝ ရောက်သွားလိမ့်မည် ဟု လုံးဝ အမတွေးမထင်ထားမိ ။
ဖေ့စ်ဘုတ် ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ ကျမပုံကို Share လုပ်ထားသူ ၂၀၀ ကျော်နေပေပြီ။ကောမန့်များတွင် မြန်မာအမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး အရှက်မရှိကြောင်း ၊တင်ပါးဆိုသည်မှာ ကုတ်ရန်မဟုတ်ကြောင်း ၊အီးအီးပါရာတွင်နှင့် ထိုင်ရာတွင်တာ သုံးသင့်ကြောင်း ၊ကျမတင်ပါး ကုတ်လိုက်သဖြင့် မြန်မာအမျိုသမီးများအတွက် များစွာ သိက္ခာကျ ကြောင်း ရေးသားထားကြသည် ကို မြင်လိုက်ရသည်။
မြတ်စွာဘုရား… ၊ ကျမ တင်ပါး ကို ရိုးရိုးသားသား ယား၍ ကု တ်လိုက်ခြင်း သာဖြစ်သည် ။တစ်နိူင်ငံလုံး ကို စော်ကားလိုစိတ်မရှိကြောင်း ပြောရဲပါတယ် ။ကျမ တင်ပါး ကျမ ပိုင်သည် ထ င်သဖြင့် အားရပါးရကုတ်လိုက်မိခြင်းသာဖြစ်သည် ။ သူငယ်ချင်း ကလဲ ကျမတင်ပါး ကျမ ပိုင်သည် ထင်သောကြောင့်ပဲ ရိုက်တင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ကောမန့် တစ်ခု ဖတ်ပြီး ကျ မ တော်တော် လန့်သွားတယ် ။ ဥပဒေ ဖြင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်သည်တဲ့ ။အမလေး ! ! ! မြတ်စွာဘုရား ကယ်တော်မူပါ ။ သူ့ ကောမန့်ကိုတင် Like နှစ်ဆယ်ကျော် ဝိုင်းလု ပ် သွား ကြသည် ။ကျမဟာကျလဲသံသယဝင်သွားသည် ။ငါ ကုတ်မိတာ လွန်သွားလား ။မထင်ပါ ။ကျမ ကုတ်တုန်း က သတိပင်မထားမိပါ ။သူငယ်ချင်း ပုံရိုက်လိုက်မှသာ ကျမ ကုတ်လို့ ကုတ်မိမှန်း သတိထားမိပါသည် ။
ကျမက ခန္ဓာကိုယ် လှသဖြင့် မြန်မာဝတ်စုံဝတ်တတ်ပါသည် ။မုန့်စားနေရင်း တင်ပါးနားက ယားလှသဖြင့် အားရပါးရ ကုတ်မိပါသည် ။မော်လီမ ကို လှမ်းဆဲရင်း ပုံဖျက်ဖို့ ပြောပါသည် ။မော် လီေ ကာ၊ခင်မြရည် ကောကျမကို တောင်းပန်ကြပါသည်။သို့သော် သူတို့ နှစ်ယောက်လည်း အခြေအနေမကောင်းပေ ။ကျမတင်ပါးကုတ်နေသည့် ပုံတင်မဟုတ် ၊ သူတို့နှင့်တွဲ၍ ရိုက်ထားေ သာပုံ ပါ ပါသည် ။ကျမတို့ကို ဂိုဏ်း ဖွဲ့ထားပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ကြသည် ဟု တချို့ က ရေးသားထားကြသည် ။ကျမတို့ မုန့်စားရင်း ချက်ချင်းကြီး တနိူင်ငံလုံး တံတွေးခွက်ထဲ ပက် လ က်မျောလိမ့်မည် ဟု မတွေးထားမိ ။ခုတော့ ကျမတို့ သုံးယောက် ပက်လက်ကော မှောက်လျက်ကော မျောနေပေပြီ ။ကျမက တင်ပါးပါ ကုတ်သဖြင့် ဇောက်ထိုးပါ မျောနေပေပြီ ။တ စ်ေ ယာက် မျက်နှာ တစ်ယောက် ကြည့်၍ မျက်ရည်ဝဲနေမိကြပေပြီ ။
ကျမတို့ သုံးေ ယာက် အစားကို ဆက် မစားနိူင်ကျ ။တူ ကို ပါးစပ်က ကိုက်ပြီး ဒူးတုန်နေကြသည် ။ကံဆိုးလှပေသည် ။ ကျမ တို့ ပုံဖျက်လိုက်သော်လည်း မမှီတော့ ၊ ကျမ တို့ ပုံနှင့် တြ ခားေ ပ့ခ်ျ မှာ တက်နေပေပြီ ။မြတ်စွာဘုရား like က 1 k ။ ကျမ ကို friend request 200 လောက် တက်လာသည် ။ကျမ တင်ထားသော နောက်ဆုံးပုံအောက် မှာ အ မျိုးဖျ က်မ လို့ လာမန့်ကျသည် ။ကျမအဖေ နှင့် တွဲရိုက်သော ပုံအောက် မှာ ကျမ ရဲ့ စပွန်ဆာ ဟု ပြောသည့် ကောမန့်တတ်လာသည် ။မကြာပါချေ… ၊ ပေခ်ျတစ်ခု က ထပ်တက်လာပြီး ကျမကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆဲကျသည် ။မဖြစ်ချေဘူး… ကျမ တုန့်ပြန်မှရတော့မည် ဖြစ်သည် ။
ကျမ တင်ပါး ကုတ်မှုသည် အချိန်မရွေး လူထုကြားထဲ ပြန့်နြှံ့ပီး လွှတ်တော်ထဲ အရေးကြီးအဆို အဖြစ် ရောက်သွားနိူင်သည်မလား ။ထိုအခါလူထုကြားထဲ အမျိုးသမီးများ တင်ပါး ကုတ်ခွင့် မကုတ်ခွင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်။အကယ်၍ မကုတ်ခွင့် တွင် မဲအရေအတွက် ၊ များ သွားပါက ၊ တခြားအမျိုးသမီး များကပါ ကျမကို ဝိုင်းဖြဲလိမ့်မည် ။နင် ယွလို့ ၊ ငါတို့ အခု ငါတို့တ င်ပါး ငါတို့ မပိုင်တော့ဘူး ဆိုပြီး သတ်လိမ့်မယ် ။ကျမတို့ ပိုက်ဆံအမြန်ရှင်းပြီး ကျမတို့အိမ်ကိုပြန်ပြေးကြသည် ။ကျမ ဖြေရှင်းဖို့ စတင်ရပါပြီ ။
အရင်ဆုံး ကျမ အမေ့ဆီက အိမ်ထောင်စု စာရင်းတောင်းရသည် ။အဖေဆိုတာ သေချာကြောင်း အရင်ရှင်းရပါမည် ။ကံဆိုးချင်တော့ အဖေ့နာမည်က နှစ်မျိုး။ မှတ်ပုံတင် နှင့် အိမ်ထောင်စု နှ င့် ကွဲနေသည် ။ မဖြစ်ချေ အမှုပိုကြီးလိမ့်မည် ။အမေက အဖေ့ကို အားဘွားရှလူး နေသည့်ပုံ ချော့မော့ရိုက်ခိုင်း ရသည် ။အဲ့ပုံနှင့် အမေတို့ မင်္ဂလာဆောင်ပုံ နှင့် မိသားစု ငါးယောက် ပုံကို တစ်ပေါင်းတည်း တင်ပြီး အဖေ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရသည် ။
ခင်မြရည်ကပြောသည် ၊ ဟဲ့ ငါတို့ သုံးယောက် cover photo ကို ဘုရားပုံ မြန်မြန်ချိန်းရအောင် ဟု ပြောလာသည် ။လိုလိုမယ်မယ် သုံးယောက်သား တစ်ယောက် တလှည့် အိမ်ထဲ မှာ တင် ယောဂီအကျီ င်္ ဝတ်ပီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်လို့ pofile pic ပါ ပြောင်းလိုက်ကြသည် ။မပြောနိူင် ၊ တင်ပါးကုတ်ရင် မြန်မာသိက္ခာကျသည် ဟု အပြောခံရသလို အချိန်မရွေး ကျမတို့က is is အဖွဲ့ က ဖြစ်သည်ဟု မစွပ်စွဲဘူးလို့ မပြောနိူင် ။
ကျမ တို့ သုံးယောက် ဒူးခေါင်းချင်း တဂတ်ဂတ် မြည်အောင် ရိုက်ရင်း ကြောက်ချေးပါနေကြပေပြီ ။ မော်လီက ပိုကြောက်နေသည် ၊ သူစသည့် ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါလား ။စပွန်ဆာ ပြဿ နာ ရှင်းလိုက်နိူင်ပေမဲ့ တင်ပါးကုတ်ခြင်း ပြဿနာ က မပြီးနိူင်သေး ။ကျမ တင်ပါးကုတ်နေပုံသည် 4.1k အဖြစ်ရောက်သွားနေပေပြီ ။မဖြစ်ချေ .မဖြစ်ချေ ။ကျမ ပထမဆုံး သူငယ်ချင်း နှ စ်ေ ယာက်ကို ၊ ကျမတွင် ပွေးနည်းနည်းရှိကြောင်း ဝန်ခံရသည်။ဘယ်သောအခါ မှ တင်ပါးလှန်ပြပြီး ပွေးကွက်ရှိကြောင်း တောင်းပန်ရလိမ့်မည်ဟု ကြိုမတွေးထားမိ ။ကျမ အဖြစ်က မနှစ် က နှင့်ပင် မတူ ။ ဇာတ်လမ်း က မှတ်တမ်း မဟုတ်။နိူင်ငံကျော်ပေတော့သည် ။
ကျမ လိမ်းသော ညစ်ဆေးဘူး နှင့် ကျမတင် ပါးက ပွေးကွက်လေး ကို ဓာတ်ပုံ ကပ်ရိုက်လိုက်သည် ။ ပွေးကွက် မြင်ရုံသာ ။ကျမ စာရှည်ရှည်ရေးသည် ။ကျမ ဘဝတွင် ပွေးကွက် စပေါ် လာပုံ ။ကျမ ပွေးကွ က်အပေါ် နာကြည်းပုံ ။ကျမ ဘာတွေစားလျှင်မတည့်ပုံ ။ရှည်လျား ထွေပြားစွာရေးပြီး ဓာတ်ပုံနှင့် လူ နှစ်ဆယ် လောက် ကို tag တွဲတင် လိုက်သည် ။အဟင့်ဟင့်… ရှက်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း ။ပွေးကွက် အကြောင်း စီကာပတ်ကုံးရှင်းပြပြီး အင်တာနက်ပေါ်တင်ရသည့် ဘဝ ။သို့သော် ကိုယ့်wall ပေါ်ကိုတင်ရုံနှင့် မပြီး ။ကျမ ပရိသတ် အဲ့ေ လ ယောင်လို့ ကျမ တင်ပါးကုတ်နေပုံ စတေးတပ်အောက်က ကောမန့် ပိုင်ရှင်တိုင်းကိုသိအောင် လုပ်ရပေမည် ။ဒါမှ ကျမ သတင်းကို ထိန်းနိူင်ပေမည် ။
ကျမ တင်ပါး မှာ ပွေးကွက်ရှိ၍ ကုတ်မိကြောင်း ၊ ကျမ မှားမှန်း အခု သိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ နောက်နှောင် ဆင်ခြင်ပါမည် ဟု ကတိပြုကြောင်း ရေးပြီး ကောမန့် များအား reply လိုက်ြ ပန် ပါသည် ။ကျမ မျက်နှာ ပူသည် ဟု ဆိုရမလား၊ အေးသည်ဟု ဆိုရမလားပင် မသိတော့ပါ ။ကျမနာမည် နှင့် အကောင့်ပေါင်းမြောက်များစွာ၊ page မြောက်မြားစွာပေါ်လာပါသည် ။ကျမ ၏ တောင်းပန်မှုကြောင့် ကျမ ၏ တင်းပါကုပ်ခြင်း အမှုသည် လွှတ်တော်အထိ ရောက်မသွား ။ ခံဝန်ကတိလောက်နှင့်သာ ပြီးသွားသည် ဟု ဆိုရပေမည် ။
ကျမကို နောက်တစ်နေ့ သတင်းမီဒီယာ တစ်ခုက အင်တာဗျူးလိုကြောင်းပြောလာသည် ။ယခုဆိုရင် ကျမ ဆယ်လီတစ်ယောက် ဖြစ်နေပေသည်။နောက်တစ်လ ထဲတွင် ပွေးဝဲယားနာ လိမ်းေ ဆး ကြော်ငြာတစ်ခု ရိုက်ရန်ပင် လက်ခံထားပါသေးသည် ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် …ကျမဘဝကို ဖေ့ဘုတ်က တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲ ပေးခဲ့ပါပြီ ။
အထူးသတိပေးချက်။ ။ တင်ပါးလိုက်မကုတ်ပါနှင့်။
မွနျမာပွညျသူတှေ ရဲ့ ဒီမိုကရစေီ စိတျဓာတျ ကို အမရေိကနျ ခြီးကြူးလိုကျပွီ
အဆုံးစွန် ထိ ပေးဆပ်သူကြီး ရဲ့ ပြော စမှတ် တွင် ခဲ့ တဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်… ( လေးစားလွန်း လို့ ကြက်သီး ထမိတယ် ..)
ဖမျးဝရမျးထုတျခံထား ရတာကွောငျ ရှထှေ့ကျမရပမေယျ့လညျး နောကျကှယျကနေ သူလုပျနိုငျတာ လေးတှေ ကို ကွိုးစားလုပျပေးနရှော တဲ့ ခငျပှနျး ရဲ့ အကွောငျး ကို ပွောပွလာ တဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
သံပုံးတီးတဲ့ သူမြားအား သနေတျပွ ခွိမျးခွောကျ သူ ကိုစဈ ကိုစဈဆိုတဲ့ အကောငျ့ ပိုငျရှငျ ကို ပွနျ တုံ့ ပွနျ ခဲ့တဲ့ မငျးမျောကှနျး
(၅၀၀၀) စားတှေ အတှကျ ထိမိ လှနျးတဲ့ သုံးသပျခကျြ